ताजा परिणामः काठमाडौं महानगर: कोर एरियामा स्थापितको सानदार अग्रता ! - jagritikhabar.com
ताजा परिणामः काठमाडौं महानगर: कोर एरियामा स्थापितको सानदार अग्रता !
काठमाडौं महानगरको कोर एरियामा पर्ने वडा नम्बर २७ को पहिलो मतपरिणामअनुसार नेकपा (एमाले) केशव स्थापितले सुरुवाती अग्रता प्राप्त गरेका छन् ।
कोर एरियाको पहिलो अपडेटअनुसार २०० मत गन्दा स्थापित एक्लैले ११८ मत ल्याएका छन् जबकी स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको ३२ मत आएको छ भने नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ७ मत मात्र प्राप्त गरेकी छन् ।
पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ५५ हजार ६२७ मतगणना गरिएको छ ।
नगर प्रमुख पदमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उमेदवार धनराज आचार्यको अग्रता लगातार बढ्दो छ ।
पछिल्लो गणनाअनुसार उनले २२ हजार ८५२ मत पाएका छन् । नेकपा (एमाले)का उमेदवार कृष्णबहादुर थापाले २० हजार १३२ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उमेदवार शंकर खरालले दुई हजार ३०४ मत पाएका छन् । लौरो चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका स्वतन्त्र उमेदवार खडकराज पौडेल (गनेस) एक हजार २१२ मतसहित चौथो स्थानमा छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुखमा एमाले
दश पालिका रहेको बागलुङको मतगणना सकिएको छ । बागलुङको मतपरिणाम आइसक्दा ८५ वडाध्यक्षमा सबै पुरुष विजयी भएका छन् भने एक पालिका अध्यक्ष र एक पालिका उपाध्यक्षमा मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् ।